Amathuluzi Wokulinganisa angama-40 + Wokuthuthukisa Ukuthengisa Kwakho Okuku-inthanethi
Amathuluzi angama-40, ama-Slides angama-40, imizuzu engama-40
NgeSonto, Agasti 21, 2011 NgoLwesine, ngo-Okthoba 27, 2011 Douglas Karr
Ngasekuqaleni kwale nyanga ngibe nesikhathi esimnandi ngenza isethulo ku- I-Blog Indiana 2011. Lo ngumcimbi omnandi ngoba mkhulu kunabo bonke esifundeni futhi ngithola ukuzijabulisa ngivivinya izinto ezintsha. Lesi sethulo besigxile kuphela kulokho abathengisi abakulahlekile ngokusebenzisa kuphela iphakethe labo lezibalo ukuthuthukisa imizamo yabo yokuthengisa online.
Ukusebenza kwenjini yokusesha, ukusebenza kwemithombo yezokuxhumana, ukukhomba imikhondo nokuqonda ukusebenza komsebenzisi ekhasini noma ngokusebenzisa isayithi akukho ku-Analytics. Amapulatifomu afana neGoogle Analytics, ngombono wami, kufanele abe yingcosana yamathuluzi wabakhangisi uma kukhulunywa ngokuhlaziya nokwenza amasu wokuthengisa ahlanganisiwe. Nayi isethulo kanye nokuxakaniseka kwamathuluzi ahlukahlukene nemibono ehlukene abayinikezayo.
Ngaphandle kokuthengisa kakhulu… yingakho ngingumlandeli omkhulu we Ama-Webtrends. Ngenkathi ngihlangana nabo eminyakeni embalwa edlule, babekwazi okwakwenzeka kulo mkhakha. Eceleni kokuthuthuka okukhulu kwamanje analytics ipulatifomu, bandise ngonya basebenza ngaphandle kwesiza. Webtrends Social, Webtrends Apps, Webtrends Mobile, Webtrends Ads… Segmentation, Optimization, Real-time analytics… iqembu linikezela ngamathuluzi amaningi futhi liwahlanganisa ngobunono ukwenza kube lula kubathengisi ukwenza amasu asebenzayo.
Tags: ibhukumaka yomphakathi
Ucwaningo Lwezenhlalo Lithi: Abanikazi Bayakhuphuka
Okucasula Abantu Mayelana Nama-imeyili
Aug 22, 2011 ku-3: 49 AM
Kuyisitaki esikhulu sama-slide futhi bekuyisethulo esihle ku-Blog Indiana. Kubukeka sengathi sisondelene kakhulu nokuthi sicabanga kanjani ngama-analytics nokukala.
O futhi ngiyaxolisa into ye-bit.ly bundle ayisebenzi. Angisoze ngasiphila leso siphakamiso phansi.